» मनहरीमा “महिला हिंशा अन्त्य गरौँ ” भन्दै सडकमा उर्लीयो जनसागर : Makwanpur news
मनहरीमा “महिला हिंशा अन्त्य गरौँ ” भन्दै सडकमा उर्लीयो जनसागर : Makwanpur news
राजीनामा प्रकरणको आफ्नो भोगाई सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, ” म जस्तो कठोर नेतृत्वकर्तालाई त यो पितृसतात्मक समाजले खुट्टा तान्ने काम गर्छ भने आम महिलाको के हालत होला “?
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १९:११
महिला हिंशा अन्त्य गरौँ भन्दै सडकबाट सयौँ मानीसहरु गर्जीएका छन् । मनहरी गाउँपालीका वडा न ७ को मनकामना मन्दिर बाट निस्कीएको र्यालीमा विभीन्न प्ले कार्डका साथ यस्तो नारा गुन्जीएको हो । शनिबार गाउँपालीका उपाध्यक्ष मनिला विष्ट लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरु समावेश भएको र्याली मनकामना मन्दिर बाट सुरु भई मनहरी-८ सिमपानीमा गई सभामा परिणत भएको थियो ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष विष्टले महिलाले अझै समान हक र अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो । संविधानको पानामा लेखिए पनि व्यवहारमा भने हालसम्म पनि कार्यन्वयन नभएको उहाँको भनाई छ । राजीनामा प्रकरणको आफ्नो भोगाई सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, ” म जस्तो कठोर नेतृत्वकर्तालाई त यो पितृसतात्मक समाजले खुट्टा तान्ने काम गर्छ भने आम महिलाको के हालत होला “? महिलालाई समान हक र अधिकार दिलाउने होमीएको आफ्नो आन्दोलननमा सबैलाई सहभागी हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
१११ औँ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवशको अवशरमा यस वर्ष गाउँपालीकाले सप्ताह व्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबार पहिलो दिन र्यालीको आयोजना गरीएको हो । दोस्रो दिन “महिलाको सुरक्षा सम्मान र रोजगार , समृद्ध नेपालको आधार” भन्ने विषयमा वक्तित्वकला प्रतियोगीता सञ्चालन गरीने बताइएको छ । त्यसैगरी तेस्रो दिन जील्लाद्धारा हेटौँडामा र्यालीको आयोजना गरीएको छ । चौथो र पाचौँ दिन वडा न १ र ६ मा क्रमश ः महिलाहरुको स्तन र पाठेघरमा हुने क्यान्सर जाँच गर्ने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्न लागिएको बताईएको छ ।